प’त्याउनु हुन्छ ? काठमाडौ मै पा’इन्छ यति सस्तो जग्गा ! – iNews16
प’त्याउनु हुन्छ ? काठमाडौ मै पा’इन्छ यति सस्तो जग्गा !
By user user6days ago
पत्याउनु हुन्छ ? काठमाडौ मै पाइन्छ यति सस्तो जग्गा !
काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लामध्ये ललितपुरका वि’कट क्षेत्रहरुमा जग्गाको मूल्य निकै सस्तो रहेको मू’ल्याङ्कन प्रतिवेदनले देखाउछ । ३ आनाको घँ’डेरी किन्न काठमाडौंमा करोडौं रकम खर्चिनु पर्छ । ललितपुरको गोटीखेलमा भने प्रति आना १२ सय न्युनतम् मूल्याङ्कन भएको छ । ***
मालपोत कार्यालय गोटीखेल मातहतका क्षेत्रमा तोकिएको यो प्रति आना जग्गाको मुल्य काठमाडौंका होटलमा २ जनाले मासुभात खाए बराबर छ । गोटीखेलसहित गिम्दी, चन्दनपुर, ठुला दुर्लुङ, बुखेल, मानिखेल, शंखु लगायतका गाउँका जग्गाको लागि आव ०७७/७८ को न्यूनतम मु’ल्याङ्कन हो यो । यो क्षेत्रमा गत आवमा पनि यही मू’ल्याङ्कन थियो । कोभिड-१९ ले सबै क्षेत्रमा अ’सर गरेको भन्दै समितिले जग्गाको मू’ल्यांकन नबढाएको बताएको छ ।
गोटीखेल क्षेत्रमा सबभन्दा महंगो भनेको रोपनीको ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ हो । पिच सडक भएका ठाउँहरुमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रति रोपनी तोकिएको छ भने अरु ठाउँमा रु.२० हजार प्रति रोपनी । यो दरले एक आनालाई १२ सय पर्छ ।
ललितपुरकै ल’गनखेल, जा’वलाखेल, कु’प’ण्डोल लगायतका क्षेत्रमा प्रति आना ३५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मू\_ल्याङ्कन गरिएको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाको पिच सडकले छोएको क्षेत्रमा १२ लाख र बाटो नभएका जग्गाहरु आनाको ७५ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । सैँ’बु आवासीय क्षेत्रमा भने १९ लाख २० हजार रुपैयाँ प्रति आना मू’ल्याङ्कन गरिएको छ ।काठमाडौं का पनि अ’धि’कांश क्षेत्रको जग्ग्ााको मूल्यांकन गत आव कै कायम गरिएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार कम भयो भन्ने गु’नासो आएका क्षेत्रहरुको बढाइएको छ बाँकी क्षेत्रको पहिलेकै मु’ल्यांकन राखिएको छ । ***
Previous अध्ययन भन्छ : काेराेना भाइरस जुत्तामा दिनसम्म जीवीत रहन सक्छ
Next ३ जना युवती, २ जना पुरुष मृत अवस्थामा फेला
प्रहरी भन्छ, ‘डाक्टर केसीलाई सं’क्रमण छ’, डाक्टर केसी भन्छन्, ‘म सं’क्रमित होइन’ (भिडियो)
By user user3mins ago
बीर अस्पतालमा को’रोनाबाट मृ’त्युपछि अंग निकालेर त,स्करी गरेकोे प्रमा,णित [ भिडियोसहित ]
डा. केसीमाथि बल प्रयोग, शिक्षण अस्पताल हिडेका केसीलाई ट्रमा सेन्टर पुर्याइयो
माया होस् त यस्तो, मृ’त्युपश्चात पनि एक हप्तासम्म श्रीमानले श्रीमतीको ला’स’संग कुरा ग’रि’रहे
कोरोनाले निधन भएको भनिएका ब्यक्तिको आँखा छैन, घाँटीमा पनि गहिरो चो’ट ! अस्पतालमा हंगामा (भिडियो हेर्नुस्)